တစ်စုံတစ်ယောက်ကတကယ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်နော်ဝေအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့? အဲဒီမှာ go သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်သင့်ပါတယ် ??? ငါ့ကိုပြောပြပါ! | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကတကယ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်နော်ဝေအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့? အဲဒီမှာ go သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်သင့်ပါတယ် ??? ငါ့ကိုပြောပြပါ!
ဤလုပ်ငန်းကိုရှိပါတယ်။ အလွန်ကောင်းသောပေးဆောင်! သင်တို့မူကား, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်, သင်အဲဒီမှာမရလိမ့်မည်! for: 1) သည်ဘာသာစကား (အနည်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်စွာ) အကောင်းဆုံးနျော (ကျွမ်းကျင်စွာ) ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ နော်ဝေအတွက်အခွန်နေထိုင်သူဖြစ် 2) ။ 3) ဒါဇင်သင်တန်းများနှင့်သင်တန်းများ (မပိုလျှင်) သွားပါ။ 4) ဒါဟာသင်သည်မကျင့်ရသောဤတူညီသောပလက်ဖောင်း () ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်၏အတွေ့အကြုံရှိသည်မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျအထကျနေရောင်ရောက်ရှိကြလျှင်ပင်ယခု,, ကနော်ဝေဥပဒေအင်အားစုထဲသို့မဝင်ရကြဟု, အရာသည်နှင့်အညီနော်ဝေအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရှိရန် pre-emptive ညာဘက်နျောနိုင်ငံသားများနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂဖြစ်ကြသည်။
နေ !! သူတို့ကနင်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊
ဒီလိုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်အကြောင်းကို program တစ်ခုစောင့်ကြည့်,
ကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်နှစ်ခါပြောခဲ့တာလဲ .... လူပျို! ကြည့်ပါ ဦး ဤအပိုင်း၌နေ့တိုင်းဆင်တူသောမေးခွန်းများမည်မျှ! ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမပြောသေးဘူး။
မလိမ်လည်မှု, လယ်ထွန်, အရက်နှင့်အမျိုးသမီးမှာအကောင်းဆုံးတစ်ချိန်ကလ။
အဆိုပါ TRC အပေါ်အိုင်တီအထူးကုများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများညင်ညင်သာသာအလုပ်လုပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့များသောအားဖြင့်ဒေသခံများမှာနေဆဲပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းလည်းမရှိ။
တစ်ဦးကကြေးစားအဆိုပါ wellsite ထားရန်အင်အား, ကြွက်သားလာပြီးနှင့်အပျက်သဘောလက်ညှိုးကိုလှည့်။ =)
သင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကောင်းတစ်ဦးပညာရေး, လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ, ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်, ရှိပါကတတ်နိုင်သမျှ, ကသက်သေပြဖို့လည်းလိုအပ်ပေသည်။ သို့သော်!
သင်ကသတိပေးချင်ပါကဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တခြားနေရာအလုပ်ရှာတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါပေါ်ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေအကြောင်းရှည်လျားဟောပြောပွဲ, နော်ဝေအတွက်တိုးမြှင့်အလုပ်လက်မဲ့များနှင့်နိုင်ပါတယ်။
ဗဟိုရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်ပြသခဲ့သောမကြာသေးမီကရုရှားမှပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်လုံလောက်သည်။ သငျသညျရေနံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အနည်းငယ်ပဲ့ထိန်းလျှင်ပင်, သင်ကျိန်းသေဒီအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ "လူနေမှုစေခြင်းငှါ" လိုလားသကဲ့သို့, သင်ကျိန်းသေကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်, ခန့်မှန်းရန်ခဲယဉ်းသည်, နော်ဝေတွင်အလုပ်လုပ်တူသောပြောရန်အလွန်ခဲယဉ်းပေမယ့်မဟုတ်ဘဲခက်ခဲသောကြောင့်မသာရာသီဥတုနှင့်အခြေအနေများ၏ ။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်နော်ဝေတွင်ရေနံတူးစင်များ၌လုပ်ကိုင်ခြင်းအကြောင်းသင်ကြားရသည့်ချိုသောပုံပြင်များများစွာရှိသည်။ ဥရောပတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးကုမ္ပဏီများသည်အပျော်တမ်းသမားများကိုငှားရမ်းရန်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခက်ခဲသောအလုပ်မဟုတ်သော်လည်းအဆင့်မြင့်အထူးကုများကိုပြောရန်မဟုတ်ကြောင်း၊ လုပ်သားအင်အားနှင့်မတူသည်မှာနော်ဝေတွင်သာမကမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုလိမ့်မည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသနည်း။ ချမ်းသာသောတိုင်းပြည်များတွင်အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် "ကြားခံ" များသည်ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အမြဲနေရာယူထားမည်။ အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေရှာဖွေလိုသူများသည်အမြဲတမ်းသူတို့၏ငွေကိုရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ ထို့အပြင်နော်ဝေသည်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုမတတ်နိုင်သည့်အချိန်သည်လက်ရှိကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါအကြံပေးသည်၊ အခြားအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါ၊ သင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်၊ ထိုအရာကိုအလုပ်တွင်အမှန်တကယ်သုံးစွဲနိုင်ပြီး၎င်းကိုရှာဖွေရန်မဟုတ်ပါ။ "